Kaiken Inu ပါ
Kai Ken inu သည်ရပ်ရွာအခြေပြု DeFi လက္ခဏာသက်သေဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီတွင်ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်သုံးခုရှိသည် - Burn, LP Acquisition နှင့် Development ။ ဒီ tokenomics မော်ဒယ်မှတဆင့်စီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီကိုငွေပေးငွေယူနှင့်အတူတစ်ဖွဲ့လုံးကအကျိုးရှိစေသည်။ Kai ken အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ကိုင်ဆောင်သူအားလုံးကိုအကျိုးပြုသည်။
Kaiken Inu တိုကင်
ဤလက္ခဏာသက်သေသည်ကိုင်ဆောင်သူများကိုဆု ချ၍ ရောင်းသူအားအပြစ်ပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။ ငွေပေးငွေယူမှုတိုင်းအတွက်အောက်ပါအခွန်များကိုအသုံးပြုသည်။
Public Sale ကာလအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်လက္ခဏာသက်သေကိုဝယ်ယူသောအခါ -
1% LP သွားသည်
၂% မှ ၇% သည်ရောင်းသူများရောင်းသည့်စုစုပေါင်းရောင်းအား၏ Eth နှင့်ညီသည်။ ကန်ထရိုက်သည် Eth နှင့်တူသောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီးပိုင်ရှင်များထံရရှိသောရာခိုင်နှုန်းကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။
ရောင်းရောင်းဝယ်မှုတိုင်းအတွက်ကိုင်ဆောင်သူများသို့သွားသော ၂% မှ ၇% သည်မည်သူမျှအကောင်အထည်မဖော်သေးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအင်္ဂါရပ်ဟာထူးခြားပြီးဒီလက္ခဏာသက်သေမှာပထမဆုံးတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ခွေးခြံ။ ဒါက LP လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးရေကန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Kaiken INU ကို Eth၊ USDT နှင့်အခြားတည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများနှင့် တွဲ၍ Kaiken INU ကိုပိုမိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ Kaiken INU သည်နောက်ယောင်ခံခြင်းအတွက်အခြားတိုကင်များနှင့်လည်းလက်တွဲလုပ်လိမ့်မည်။
ခွေးအိမ်။ Dog House သည် Kaaken Inu နှင့် Dog Farm တွင်တွဲဖက်ပါက၎င်းသည်အငြင်းပွားဖွယ်စွမ်းအားကိုနှစ်ဆတိုးစေလိမ့်မည်။
Crypto ခွေးပေါက်စ။ ၎င်းသည်အခြားတိုကင်များနှင့် Kaiken INU ကိုစော်ကားခြင်းမှရရှိသောအခြားလက္ခဏာသက်သေဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤ crypto ခွေးငယ်များသည်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်နိုင်သည့် NFTs များဖြစ်လာလိမ့်မည်
ခွေးစာ။ ၄ င်းတို့ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာကြီးထွားနိုင်ရန်အတွက် Crypto ခွေးပေါက်စများကိုကျွေးမွေးရန်ဝယ်ယူလိမ့်မည်။
ခွေးဗီတာမင်။ ၎င်းသည် crypto ခွေးပေါက်စများကိုအာဟာရဖြည့်ပေးမည့်နောက်ထပ်လက္ခဏာသက်သေဖြစ်လိမ့်မည်။
KAI Eco App ။ ၎င်းသည် Kaiken Inu စီမံကိန်း၏တရားဝင်မိုဘိုင်း app ဖြစ်သည်။
တစ်ဘီလီယံအမှတ်အသားနှုန်း $7မှာပုဂ္ဂလိကရောင်းချမှု။
dxsale မှတဆင့်တစ်ဘီလီယံအမှတ်အသားတစ်ခုလျှင် $ 10 ကြိုတင်ရောင်းချမှု။
တစ်ဘီလီယံအမှတ်အသားနှုန်း $ 12 မှာအများပြည်သူရောင်းချမှု
% ဖြန့်ဖြူးခြင်း။ ဤသည်ကိုအများပြည်သူရောင်းဝယ်စဉ်ကာလအတွင်းသာလျှင်သက်ရောက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Kishu နှင့် Shib Inu ကိုကိုင်ဆောင်သူများနှင့် marketcap အရမှီရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့သေးငယ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေလုပ်နေတာ။
2021 Q3 1. ကန ဦး ယူ -of
• CG လျှောက်လွှာ
• CMC လျှောက်လွှာ
Kai Eco Wallet Development
• CEX (စာရင်း ၁-၃)
• Dog Farm ဖြန့်ကျက်ခြင်း
• CEX စာရင်း (စာရင်း ၁-၂)
• Dog House ဖြန့်ကျက်ခြင်း
• Kai Eco Wallet ကို Update လုပ်ပါ
2022 Q1 3. ကြီးထွားမှု
• Crypto ခွေးပေါက်စဖွံ့ဖြိုးရေး
• CEX စာရင်း (ထိပ်ဆုံး ၅ မှ ၁)
• Kai Wallet ကို Update လုပ်ပါ
2022 Q2 4. ညီလာခံ
အပိုင်းအစအားလုံးကိုသင့်တော်သောနေရာများတွင် ထား၍ KAI ဂေဟစနစ်ကိုစတင်တည်ဆောက်ပါ။
ကန ဦး မီးရှို့မှု
သင့်ရဲ့ ICO စာရင်းပြုစုလိုပါသလား?
သင့်ရဲ့ ICO စာရင်းပြုစုပါ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိထောင်နှင့်ချီသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံရောက်ရှိပြီးယခုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အမြန်ဆုံးဖြစ်သည် ICO အတွက် KYC ဝန်ဆောင်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံကိုယနေ့ဖြည့်စွက်ပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်အားဆက်သွယ်ပါမည်။